The Yahoo mbanye anataghị ikike emetụta ya niile akaụntụ akaụntụ | Akụkọ akụrụngwa
Yahoo anaghị akwụsị ịgha ụgha, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ dịkarịa ala ọ bụ echiche ọ na-enye banyere flaws nchebe ya.
Na 2013, Yahoo tara ahụhụ na nke egosiputara ihe ndekọ ego nde 3.000 niile Agbanyeghị, ekpughere ihe ọmụma a ugbu a n'ihi na tupu, na ọ bụ naanị afọ atọ ka ihe mere, ọnụ ọgụgụ a nyere dị obere.
Ọ dịghị onye gbanahụrụ mbanye anataghị ikike ahụhụ site na Yahoo
Nnukwu data ngabiga data nke Yahoo tara na Ọgọstụ 2013 metụtara ọnụọgụ nde mmadụ atọ nke ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ n'oge ahụ. Nke a bụ otú mbipụta ndị nchụ nta akụkọ ndondo nyere Verizon, ụlọ ọrụ nne na nna Yahoo ebe ọ bụ na enwetara ya na mbido afọ ahụ. Otú ọ dị, eziokwu bụ na ọnụ ọgụgụ ndị emetụtara na-arịwanye elu ruo oge ruo na ngụkọta.
Mgbe nsogbu ahụ pụtara ìhè, ọ bụ ruo afọ atọ mgbe ihe ndị ahụ gasịrị, na 2016, ọnụ ọgụgụ mbụ kwuru banyere nde 500 metụtara akụkọ. N'oge na-adịghị anya, Yahoo kwuru na mbanye anataghị ikike ahụ metụtara 1.000 ijeri akaụntụ, ya bụ, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnụ ọgụgụ akaụntụ niile adị n'oge ahụ. Ma ugbu a, ihe karịrị afọ anọ ka eziokwu ahụ gasịrị, ọ bụ Verizon na-egosi na, ekele maka teknụzụ ọhụụ dịnụ na ọrụ nyocha emere "site na enyemaka nke ndị ọkachamara na mpụga mpụga", mwakpo ahụ dị njọ karịa ka ọ metụtara akaụntụ Yahoo niile na 2013.
Cheta na ihe omuma nke ekpughere bu aha, adreesị ozi-e, akara ekwentị, ụbọchị ọmụmụ, okwuntughe yana ajụjụ nchekwa na azịza ha ma ezoro ezo ma ezighi ezi. Banyere data dị ka akaụntụ akụ ma ọ bụ ozi na akwụmụgwọ na / ma ọ bụ debit kaadị, ọ ka bụ kpamkpam doro anya ma ha kpughere ma ọ bụ.
Ka ọ dị ugbu a, Verizon na-ekwu na ndị otu Yahoo na-aga n'ihu na-eme ihe dị mkpa iji melite nchekwa. Olee otú ịtụkwasị obi!?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » The Yahoo mbanye anataghị ikike emetụta niile ha ọrụ na akaụntụ
A na-ebipụta ihe osise nke nwere ike ịbụ ụgbọ ala eletrik nke Tesla